ओली–दाहालमाथि चार नेताको दबाब, कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा अनुमोदन हुने - समाचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १, २०७७ सरिता तिवारी
‘राम’ यति बेला जनमानसको खाँचोको मुद्दा कत्ति पनि होइन । त्यसमाथि पनि राज्ययन्त्रले निरन्तर कर्के आँखाले हेरिरहेको ठाउँ माडी ! जसले लामो समयदेखि बाहिरी दुनियाँभन्दा अलग्गै टापुजस्तो जीवन बाँच्दै आएको छ । जसको दैनन्दिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु र बँदेलसँग लछारिँदै, दगुर्दै ज्यान जोगाउन हाँफजाँप गर्नैमा बित्छ । निकुञ्जका कर्मचारी र रक्षकबाट प्रत्येक दिन अपमानित र आहत हुँदै बित्छ । जहाँ एउटा सग्लो मान्छेको आत्मसम्मान र सासको मूल्य निकुञ्जको एउटा जनावरको भन्दा निम्न कोटिको छ । जहाँ निकुञ्जभित्र प्रवेश गरेर घाँस काटेको, निगुरो वा घोंघी टिपेकै ‘अपराध’ मा निकुञ्जका रक्षकबाट निर्घात कुटिनु र मारिनु एउटा आम खबर मात्रै हुन्छ ।
अचानकसँग र एकाएक यो बेमौसममा किन, कसलाई चाहिएको हो राम ? यो कुबेलाको रामभूमि मुद्दाले कसको हित र भाग्यको हिसाबकिताब गर्ने हो ? यी प्रश्नको उत्तर यति बेला सरकार र सत्तारूढ दलको चरित्र बुझ्ने जोकसैले जानेकै छ ।
प्रकाशित : भाद्र १, २०७७ १८:४९